टाउको दुख्ने समस्या किन आउँछ ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
टाउको दुख्ने समस्या किन आउँछ ?
गर्मीको मौसममा मानिसमा देखिने एउटा प्रमुख समस्या हो, टाउको दुख्ने । यो मौसममा मािनसमा अत्यधिक मात्रामा टाउको दुख्ने समस्या हुने गर्दछ । तर यसलाई सामान्य मान्नु हुदैँन । यसको समयमा उपचार गरिहाल्नु पर्दछ ।
सामान्य समस्या हो भन्दै हामी उपचार गर्न जाँदैनौँ । केही समयमै सन्चो हुन्छ अथवा केही दिनमा ठीक हुन्छ भन्दै हामी टाउको दुख्ने समस्यालाई उति ख्याल राख्दैनौँ । यदि टाउको दुख्ने समस्यालाई हामीले लगातार बेवास्ता गरेको खण्डमा अरू बढी समस्या उत्पन्न हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
टाउको बिना कारण दुख्दैन । यो बिभिन्न कारणले हुन सक्छ । त्यसैले टाउको दुख्न थाल्यो भने सकेसम्म चाँडै चिकित्सककोमा जानु पर्दछ । अन्यथा बिस्तारै टाउको दुख्ने समस्या बढ्दै गयो भने यो माइग्रेनको लक्षण पनि हुन सक्छ । त्यसैले तुरुन्त चिकित्सककहाँ पुगिहाल्नुपर्छ ।
टाउको दुख्दा घरमै गर्न मिल्ने केही उपचार
– कहिलेकाहीँ एकदमै टाउको दुख्यो भने खाली पेट भए तत्काल केही खानु पर्दछ । भोकले पनि टाउको दुख्ने गर्दछ ।
– टाउको दुख्नुमा अनिन्द्रा पनि हुन सक्छ, यसमा ध्यान दिने । यदि अनिन्द्रा हो भने सम्भव भएसम्म निदाउने प्रयाश गर्ने र निन्द्रा लागुन्जेल पर्याप्त सुत्ने ।
– शरीरमा भएका केही गडबढीले पनि टाउको दुख्न सक्छ, यस्तोमा केवल १ गिलास चिसो पानी पिएमा दुखाई केही कम हुन सक्छ ।
– अत्यधिक टाउको दुखेमा चिसो पानीले आफ्नो मुख र टाउको धुनु पर्दछ । तर, लगातार धुनु हुँदैन ।
– अत्यधिक टाउको दुखेको वेला बेलुकी दूध पिउने हो भने पनि टाउको दुख्न कम हुन्छ ।
– कहिलेकाहीँ आँखाको पावरमा उतारचढाव आउँदा पनि टाउको दुख्न सक्छ । त्यसका लागि आँखाको जाँच गर्न जरुरी छ । विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा